भारतलाई तर्साउनको लागि चीनलाई आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा सुम्पिदिएको आरोप | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » भारतलाई तर्साउनको लागि चीनलाई आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा सुम्पिदिएको आरोप
भारतलाई तर्साउनको लागि चीनलाई आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा सुम्पिदिएको आरोप
काठमाडौ पुस २४ गते । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद सरिता गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईतबार संसदमा सम्बोधन पश्चात् देखिएको दृश्यले नियामावली ‘ब्रेक–डाउन’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आफूले यो ब्रेक डाउनलाई दुर्घटनाको रुपमा भन्दा पनि सुनियोजित रुपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सामान्य पाराले, नजानिँदो पाराले वा दुर्घटना भएको घटना होईन । यो सुनियोजित नै हो ।’
उहाँले उक्त घटना सुनियोजित कसरी हो भन्ने कुरामा यसरी व्याख्या गर्नुभयो, ‘यो एउटा यस्तो पार्टीको तर्फबाट भइरहेको छ, जसको पोल्टिकली थियोरी जनताको बहुदलीय जनवाद छ । जवजले के भन्छ भने जुन हाम्रो शक्ति पुग्छ, त्यो दिन हामीले फोर्सफुल्ली पनि शक्ति क्याप्चर गर्छौं भन्छ । आईतबारको घट्ना यदि राजनीतिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले संसदलाई कब्जा गर्ने प्रयास गरेको छ ।’
उहाँले कांग्रेस पनि उक्त दिन संसदको लागि भन्दा पनि मात्रै प्रतिपक्षको लागि अगाडि आएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस त्यसरी अगाडि आउनु भनेको सांसदहरुको अधिकारको रक्षाको लागि होईन, प्रतिपक्षको लागि आएको देखियो । सबैको अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ ।’
मुख्य कुरा सभामुखले नियम उल्लंघन गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो मात्रै कुरा गरेकोमा उहाँको गुनासो थियो ।
गिरीले प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको क्रममा ‘डिजिटल एक्शन प्लान’ बारे सांसदले राखेको धारणामाथि टिप्पणी गर्दै असभ्य भनेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सांसदलाई असभ्य भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? यसमा सभामुखले उहाँको बोलिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो । तर, सभामुखले गर्नुभएन् । सभामुख फेल हुनुभएको छ । सभामुखको पहिलो काम भनेको सदन र सांसदहरुको गरिमा रक्षा गर्नु हो ।’
उहाँले सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तर, सभामुखले मनमा के सोच राखिकन प्रश्न सोध्ने कुरामा नो भन्नुभयो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई के लाग्छ भने, अहिले म यो बारेमा धेरै बोल्दिन् । किनभने आउने दिनका घटनाहरुले त्यो ईन्टेशन अगाडि आउँछ ।’ यद्यपी आफू राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले यो समस्याको समाधान नियामावलीअनुसार नभए आगामी आउने दिनहरुमा धेरै ठूलो चूनौतिमा जानसक्ने खतरापनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।
गिरीले यदि यहाँबाट पनि पछि गए अर्ली ईलेक्शनतिर पनि जान सक्ने खतरा सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म यो पनि सम्भावना देखिरहेको छु । जहाँ ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यहाँबाट निरंकुशता सुरु हुने सम्भावना बढेर जान्छ । आईतबारपनि संसदमा ब्रेकडाउन भएकै हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा राजपा र फोरम नेपाललाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको पनि उहाँ्ले गुनासो पोख्नुभयो । बरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मिलेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेको बताउँदै उहाँले नियमावलीको ‘लेटर र स्पिरिट’ भन्दा बाहिर गएर समस्याको समाधान खोजियो भने आउने दिनमा धेरै खतरा हुने पनि चेतावनी दिनुभयो ।
फरक प्रसँगमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको डिजिटल एक्शन रुमलाइ हाई–टेक बनाउने क्षमता नेपालसँग भएको पनि सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले टेण्डर निकालिसकेको कुरालाई रद्द गरेर हुवावे कम्पनीलाई दिनुभएको छ । यदि दक्षिणलाई तर्साउनको लागि अहिलेको नेपालको सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनलाई आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा सुम्पिदिने हो ? यदि हो भने, त्यसको परिणाम के हुन्छ ?’
आफूले यस विषयमा संसदमा पनि कुरा उठाएको गिरी बताउनुभयो । ‘मैले यसबारेमा संसदमा पनि कुरा उठाएको थिएँ । के नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले एशिया प्यासिफिक रिजनको नर्थ कोरिया बनाउन खोज्नुभाछ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘साउथ एशियामा पनि नेपाललाई नर्थ कोरिया बनाउन खोजेको हो ?’